ILondon ukuya eParis In 2:20 iiyure Ngu-Eurostar Uloliwe | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > ILondon ukuya eParis In 2:20 iiyure Ngu-Eurostar Uloliwe
Ixesha lokuFunda: 10 imizuzu
Enye common kakhulu kunye neendlela okulula ukuhamba phakathi London ne iParis nge Eurostar, i-high speed Uloliwe odibanisa iingqukuva ezimbini. Nangona kukho plethora iinketho zabahambi abafuna ukwenza hop, i Eurostar uhlala njengenye yeenketho best for speed, iindleko, nokuba lula. Lo loliwe isebenzisa intunja channel, okanye “chunnel,” yakhiwa phakathi England kunye neFransi ukuze ufumane kuwe ngokukhawuleza oya kuyo.
Ezantsi, ungafumana zonke iinkcukacha kuza kufuneka uncedo ukuphatha London yakho uhambo Paris Eurostar.
Eli nqaku ibhalelwe ukuze kufundiswe abathengi malunga uhambo ngololiwe kwaye yenziwa yi Gcina A Isitimela, Amatikiti amaTikiti amaxabiso aphantsi eewebhusayithi eYurophu.
Kutheni Travel Europe By Train?
Ngaphambi kokuba siqale, ke umzimba wakhe ngaphandle ngqo kutheni Europe kungcono abanamava nge umdla uloliwe- emveni kwakho konke, eli lizwekazi sele behlala amawaka eminyaka, leyo ethetha iziseko zawo kudla kuphuhliswa kakhulu. Ezinye iindlela zokuhamba zifumaneka lula, kodwa kukho into ekufuneka uthe womba elizukileyo yokuhamba kaloliwe. Oku kuyinyaniso kakhulu ukuba abahambi-okokuqala, who can take advantage of train schedules to hop on board just before it departs. Oku kuchasene obukhulu moya eYurophu, apho ubuncinane ixesha lakho ukufika ngaphambi sokuhamba iiyure ubuncinane ezimbini, kwaye uchitha ixesha elongezelelweyo kunye nemali emsebenzini kwindawo kwisikhululo.
Ethetha kwexesha lokuhamba, EYurophu Laziwa ngokuba iziporo yayo-high speed, kakhulu kuphuca motorways ziphithizelayo kunye moya akhiwe inconveniently. Loliwe kulo lonke izwekazi kuphekeka ngokufuthi ngqo, leyo ethetha ngaphantsi kwexesha emsebenzini kunye nexesha ngaphezulu ekubhekeni.
Izikhululo Isitimela kuzazi kokuba lula ukufikelela ukuya kwiindawo ezinkulu umkhenkethi kunye ezinika, so it’s easy to step off your train and head directly to your destination.
Ekugcineni, amatikiti etreyini ifaka kakhulu, esinika ukuba ukuzisa imithwalo kwaye khetha izihlalo zakho ngaphandle ekuhlawuleni iifizi lenkohlakalo ezongezelelweyo.
Konke oku ukuba sithi, ngelixa Europe iinketho ezininzi zabahambi, akukho beats uhambo elungileyo kaloliwe endala.
ILondon ukuya eBrussels i-Eurostar Trains
ILondon ukuya eParis Eurostar Oololiwe
ILondon ukuya eAmsterdam Eurostar Oololiwe
Nokufumana indawo itikiti lakho On A Eurostar Isitimela
Enye yeempawu ezilungileyo zokuthatha uloliwe xa kuthelekiswa nenqwelomoya kukuba i-Eurostar ibaleka ukusuka kumbindi wesixeko ukuya kumbindi wesixeko. izikhululo ezikude Ngokungafani ezifana London Heathrow kunye Paris Charles De Gaulle, Uloliwe wakho isuka London St-Pancras International kunye ifika e Gare Du Nord, apho unako lula ukuhamba kuzo zonke izinto best esi sixeko.
njengoko kukhankanyiwe, amatikiti onke Eurostar ziquka iziqwenga ubuncinane ezimbini imithwalo kunye bag ngesandla. Ukuba uzisa eninzi yemithwalo, unako kwakhona ukhetha i itikiti okanyengaphezulu evumela wakho ukuba iingxowa ngaphezulu. Okuchasene, moya mali angabiza ngaphantsi zokubhukisha zabo kokuqala, kodwa iimali bag kunye neentlawulo ngokhetho isihlalo ngokukhawuleza dibanisa i.
Amaxabiso amatikiti kulo hambo bayathanda ukutshintshatshintsha lukhulu, ngoko sincoma bathenga amatikiti msinyane nje ukuba ukwazi. Ukuthetha jikelele, la matikiti ukuya athotyiweyo iinyanga ezintathu kwangaphambili, nangona kuxhomekeke kwixesha unako nako ukumfumana ukuya kwiinyanga ezintandathu kwangaphambili. Sincoma usebenzisa zethu website ukufumana ukubhukisha amatikiti etreyini yakho, leyo uyazingxoka ngokuzenzekelayo lonke uluhlu ekhoyo ukuze ngexabiso ixabiso kunokwenzeka, aqinisekisiwe.
ILondon ukuya koololiwe baseAntwerp Eurostar
ILille ukuya eLondon i-Eurostar Trains
ILondon ukuya kwiStrasbourg I-Eurostar Trains
ILondon ukuya eRotterdam Eurostar Oololiwe
Entengo Types Of Amatikiti
Uloliwe Eurostar isebenza ezingontsini iklasi ezintathu-, kuxhomekeke ibhajethi yakho. Kwabo bafuna nje ukuba ukusuka kwindawo enye ukuya kwenye, amatikiti udidi lwesibini ngcono. Abo ekuhambeni Ishishini endaweni zithande itikiti Standard iNkulumbuso okanye Business Premier, nobabini ezivumela ukuba uhlale e Abaqeqeshi yokuqala-class nokubonelela isidlo kuhambo lwakho, ngoko ke masifunde okuncinci malunga neLondon ukuya ePitoli amatikiti kaloliwe:
Uhlobo lwemali ezimqoka izithintelo
2 amaqhekeza bag imithwalo kunye enye ngesandla ifakiwe
Ukukhetha Seat ziyafumaneka emva yezohambo
Ayiphindi ibhataleke. Ngaphambi train sokuhamba, uyakwazi ukutshintsha itikiti lakho. A Imali Ukutshintsha 40 Euro kunye imali umahluko lisebenza. Ukuba itikiti omtsha ibiza ngaphantsi itikiti yokuqala, akayi kuba ibuyiswe umahluko ixabiso.
izihlalo ezinyuselweyo Zibonisa legroom ngakumbi kunye namava premium
Isidlo ukukhanya kunye neziselo ziya zinokuthunyelwa isihlalo sakho
Ayiphindi ibhataleke. Ngaphambi train sokuhamba, uyakwazi ukutshintsha itikiti lakho. A Imali Ukutshintsha 50 Euro kunye imali umahluko lisebenza. Ukuba itikiti omtsha ibiza ngaphantsi itikiti yokuqala, akayi kuba ibuyiswe umahluko ixabiso.
3 amaqhekeza bag imithwalo kunye enye ngesandla ifakiwe
izidlo Chef-yenzelwe kwaye champagne ziya zinokuthunyelwa isihlalo sakho
Ukufikelela kwi lounge kuphela ngaphambi kokuba zihambe
Iinkonzo ukubhukisha Taxi ziyafumaneka
ezinqunqanyisiweyo Free kunye ukutshintshiselana mda ukuya ku 60 emva kokumka kuzo zonke iindlela phakathi UK, France ne Belgium.
ezinqunqanyisiweyo Free kunye ukutshintshiselana mda de lokuhamba kwindlela ngqo phakathi UK kunye Netherlands, kunye nokwabelana simahla kwindlela ngqo (Thalys / Eurostar nge Brussels) phezulu de ahambe.
Njengokuba kukhankanyiwe ngaphambili, amaxabiso olutshintsha-tshintsha ngayo imihla yakho zokuhamba, ngoko ke kufuna ukuba ukubhukisha kanye nokufumaneka ivula. Ukuba incwadi ngokwaneleyo kwangaphambili, uya zingafuna ukuba ahlawule ngawo 55 dollar indlela enye, okanye 90 dollar lokuya nobuya. Ukulinda de kube ngumzuzu wokugqibela ingaphinda iyiqhube amaxabiso isibhakabhaka-aphezulu, kunye neendleko phantse kabini i kamva uthenga itikiti lakho. Oku kuyinyaniso amatikiti zombini ngeenxa zonke-uhambo kunye nendlela enye,.
kulungile ukuba ukuphawula ukuba Eurostar ayifumaneki kubo bonke abo ubambe lokuphumelela kaloliwe a, ngoko ukuba ufuna ukwenza olu hambo i egudileyo nezifikelelekayo, uthenge itikiti lakho uloliwe in advance. Ungafumana amatikiti oololiwe online kwi website ezahlukeneyo, nangona amaxabiso itikiti uloliwe ukuze olunyuswe ngokugqithisileyo xa kuthelekiswa Gcina A Isitimela.
I-Calais ukuya eLondon i-Eurostar yoololiwe
IBruges kwiLondon iEurostar Trains
I-Hague eya eLondon i-Eurostar Trains
I-Berlin ukuya eLoliwe i-London Eurostar
Khangela-In At London St-Pancras Station
Kuxhomekeka eklasini yakho imali, uya ufuna ukufika kwisikhululo sakho yokuphela ubuncinane 40-60 imizuzu ngaphambi koololiwe bemka e-london baye kwi-paris. Ukuba ubhukishe itikiti leNkulumbuso elikwinqanaba lokuqala ukusuka eLondon ukuya eParis, uya kukwazi ukufikelela kwi lokuphumla kuphela. kungenjalo, kukho iivenkile ezininzi kunye zokutyela ezikhoyo ukuba ukufunda. Ezinye zokutyela esizithandayo ziquka:
AMT Coffee – A shop coffee kwiindawo ezimbini ngaphakathi ezina-. It inikeza iziselo ezenziwe kunye neendebe compostable ngokupheleleyo, leyo eyenza uncumo bume.
I uMphanda Vault – A pub IsiNgesi yesintu yokuba Beers linikeza zobugcisa, ale real, kuqala, kofu, nemimoya. Kwakhona ukhonza isidlo sakusasa kunye yokukhwela pub zakudala.
Chop'd – A yokutyela zempilo ezijoliswe, Chop'd inika iintlobo isuphu, salads, Pheka usonga kuzo zonke iintlobo lwabahambi.
Xa kunokwenzeka ukuba, wenza kuphela uhambo ngosuku, isikhululo kwakhona impawu iindawo-imithwalo lasekhohlo ukuba ukugcina impahla yakho. Ezi iinketho yokugcina sitshiphu yaye ngokufuthi kufundisa iiyure inkonzo eyandisiweyo.
I-Cologne ukuya kuloliwe waseLondon i-Eurostar
I-Ghent eya eLondon i-Eurostar Trains
IMiddelburg ukuya eLondon i-Eurostar Trains
Ukukhawulelwa ukuya eLondon i-Eurostar Trains
Eyayifakwe The Eurostar Train
kanye eyayifakwe, ixesha lokuhamba lilonke ukusuka eLondon ukuya iParis malunga 2 iiyure kwaye 16 imizuzu. Unalo yakho ukufika pre-lokuhamba, ixesha uhambo lwakho lilonke iza kuba phakathi 3 iiyure.
Lo loliwe ngokwayo ibonisa yokuhlala eqhelekileyo kwakunye iitafile ezikuvumela ukuba umsebenzi udle lula. Ezi zithande ukuba ukubhukisha ekuseni, nakuba, ngoko qiniseka ukuba bakhethe kwangaphambili ukuba yiloo Ndingathanda into. Enoba uphi wena uhlale, nawe nakanjani ukuba legroom elungileyo kunye iiplagi ukuba babize izixhobo zakho.
Njengoko kukhankanyiwe ngaphambili, kukho ezamahala WiFi eyayifakwe, ukuze uhlale up nayo yonke email yakho kunye neemfuno kwimidiya yomphakathi. Kuxhomekeka itikiti lakho, unako kwakhona o ukuba umqeqeshi lokutyela, apho unako ukutya ukufumana, iziselo namaqebengwana. Ukuba uhleli ekharejini lokuqala-class, ukutya ziya kusiwa ngqo isihlalo sakho.
Dusseldorf ukuya eLondon Eurostar Oololiwe
U-Essen ukuya eLoliwe wase-London Eurostar
Munster ukuya eLondon Eurostar Oololiwe
I-Leuven eya eLondon i-Eurostar Trains
Ukufika At Paris Gare Du Nord Train Station
Uqeqesha e St. station Pancras bafika phakathi Paris, kwisikhululo Gare du Nord. Esi sikhululo langa msebenzi wobugcisa kukodwa, kunye sibonakala kwakhiwa yee 1800 yaye zigcinwe kakuhle. Thatha umzuzwana ukonwabela isakhiwo ngaphambi kokuba ngaphandle ukutyelela umzi.
Ngokuba uya sele uyigqibile check-kuni akuyi kufuneka phambi kokuba i-UK ukugqibezela inkqubo ukufika. Oku okwangoku oyinyaniso ulawulo yokundwendwela, nangona ne UK abashiya EU kungenzeka ukuba ezi nkqubo iza utshintsho olukhulu.
Xa ufika, uya kuba kweso sixeko, qhu kukho ukutya, iivenkile kunye neziselo. Ukuba ukhetha ukushiya kwizikhululo, uya kufumana ekufuphi Brasserie Terminus Nord, a famous Art Nouveau style restaurant directly across the road from the train station. kungenjalo, kufuneka nje wasibhadulisa naliphi na icala ukufumana ezinye ukudla okulungileyo, uselayo, eYurophu.
Ngaphakathi kwisikhululo sikaloliwe ngokwayo, uya kufumana Metro yaye Rer oololiwe, kwakunye koololiwe lwaluhamba kuwo France. komzila Local kunye noololiwe Metro angakusa bonke ikomkhulu French, abaninzi olondolozo lwembali, zivaliweyo, neegalari ezo, kunye nabakhenkethi ezinika ngaphakathi.
Ukuba ukufika kwangethuba nesihloko ngqo ngaphandle lokukhenketha phambi ukhangela-kwi kwihotele yakho, ukuze abe ngumbono omhle ukuba niwaxhaphaze iinketho ekhohlo impahla ekhoyo phakathi kwisikhululo sikaloliwe. Ezi zokuwagcina akubizi kwaye ibe ukhetho elisemagqabini abo babelinde ukuba nkulu imihla yabo.
As a holder of the Eurostar direct train ticket, ukuba angakwazi ukuluqonda 2 for 1 ufikelelo abaninzi kwabo lwembali, neegalari, leyo ukukusindisa amakhulu dollar.
IFrankfurt yaya eLondon i-Eurostar Trains
IMunich ukuya eLondon i-Eurostar Trains
IiMoutiers eziya eLondon i-Eurostar Trains
I-Marseilles eziya eLondon i-Eurostar Trains
Train Times For London To Paris Nge Eurostar
I Eurostar ubaleka ngokufuthi, nge ku 19 Utyeshelo ngosuku kuxhomekeke neeholide ngeempelaveki. Uloliwe wokuqala wosuku ihamba ngo- 05:40 uthabathe inani 2 iiyure kwaye 37 imizuzu. Oku kudla enye amatikiti ingenandleko ebifumaneka, ngoko ukuba sele zazidlala ndibathuma ndivuka kusasa uyakwazi ukugcina imali kunye nentloko phaya qheke ukusa. Enye inzuzo yalo yokumka phambi kwexesha kukuba ixesha lakho ukufika ku iParis 09:17, nto leyo ethetha ukuba kufuneka usuku lonke phambi kwakho ukuba naziphi na izinto ongathanda ukuba ukhethe.
amaxesha Route ingenjalo ngeyure okanye ngaphezulu, esikunika inala ongakhetha apho ukuba ukhethe. Uloliwe wokugqibela wobusuku ihamba ngo- 18:31 wafika 21:47, abakushiyayo nexesha ukufumana kwihotele yakho okanye intloko ngenxa yentwana yokudla kade-ubusuku enifunda izibane ezibengezelayo Eiffel Tower. Ezi oololiwe sasebusuku ingase iimoto olele, zona okulungileyo indlela uthathe imizuzu embalwa ubuthongo phambi kokuba aqhubeke nohambo yakho. Ngaphezu, ezinye loliwe ukuze bahambe phakathi kwiindawo ubhedu ubusuku.
UDen Helder kuLoliwe wase-London Eurostar
I-Maastricht kwiLondon i-Eurostar Trains
I-Dijon ukuya eLoliwe we-London Eurostar
I-Bonn ukuya eLoliwe we-London Eurostar
Ezinye iindlela nge-Eurostar yoLoliwe engeyiyo iLondon ukuya eParis
Nangona eli nqaku ikakhulu ukuhamba phakathi St. Station International Pancras kunye Gare Du Nord, i Eurostar kwakhona basebenzisa inani iindlela ngqo ukusuka eLondon:
Brussels – Uqeqesha kuqhuba yonke 90 imizuzu ukuba 2 iiyure. Kuthatha nje phezu 2 iiyure ukufikelela Brussels Midi / isikhululo Zuid.
Calais / Frethun- Oololiwe ukubaleka ngeyure okanye ngaphezulu ukusuka eLondon kunye zokuhamba Uloliwe lilonke nje ngaphezu kweyure.
amancinci- Oololiwe ushiye phantse ngeyure ukuya Lille, ibekwe kumantla eFransi. Kukho i lula uqhagamshelo kwinethiwekhi French TGV ukuba ukudluliselwa. ixesha Journey nama 1.5 iiyure.
Disney Paris – Oololiwe Ndibaleka izihlandlo eziliqela ngeveki unyaka wonke kwaye imihla ngexesha leeholide zesikolo. Ilungelo kwisikhululo sikaloliwe ngaphandle Disney emnyango. Uhambo kuthatha ngaphantsi 3 iiyure zibalelwa.
Lyon, Avignon, kwaye Marseilles- Kuwo wonke unyaka uloliwe isebenza ukusuka 1 ukuba 5 iintsuku ngeveki, nakuba zonyaka ochaphazelekayo ngoko qiniseka ke ukuba isebenza xa udinga. Ime kwisikhululo Lyon Part-Dieu (4.75 iiyure), station Avignon TGV (6 iiyure) kunye station eMarseilles St Charles (6.5 iiyure).
Amsterdam and Rotterdam – Inkonzo entsha olwaqala ngo 2018, uvele uthabathe enye koololiwe imihla Amsterdam, equka kokuma Rotterdam. ixesha uhambo Baphela imalunga 4 iiyure.
Kukho nezinye iindlela ngamaxesha efumanekayo imisebenzi efana Ukuskiya ebusika, ngoko qiniseka ukuba ukhangela emva rhoqo ukuze ubone ukuba inkonzo uyasebenza.
Kwakhona kuyenzeka ukuba ukufikelela kwezinye kwiindawo ngaphakathi eYurophu ngokusebenzisa wayethe owodwa kwaye nokuqhubeka phambili ukusuka kwizitishi akhiwe e Lille, Brussels, no Paris. Ukufumana amatikiti kaloliwe kulula kwaye ifuna kuphela hambo eyodwa.
Ngokufanayo, ukuba ukuba bahamba ukuya eLondon ukusuka kwenye indawo kwi UK, Kwakhona ungakhetha ukuqalisa uhambo lwakho Eurostar kwi Ebbsfleet International Isitetjhi somsebenzi okanye Station International Ashford endaweni St. Pancras. Oku kuluncedo ngokukhethekileyo kwabo zithuthi, njengoko Ashford inikeza igaraji yokupaka kunye ukufikelela ngqo ukuya kwisikhululo sikaloliwe.
Incwadi Amatikiti With Gcina A Train Kuba London Your To Paris Train
Khangela isayithi yethu amatikiti incwadi yonke zokufikela eYurophu best, okubalwa Bheljiyam, ElamaTaliyane, Swizalend kwaye i UK (kuquka London to Paris ngololiwe ne Eurostar). enjini yokukhangela yethu yenzelwe ukuba Gcina imali kuzo zonke amatikiti kwaye ziquka akukho ntlawulo nokubhukisha. Senza kube lula kuwe ukuba uthenge ngokwamkela iindlela ezininzi lomvuzo, kubandakanya ikhadi lamatyala, Giropay, nabangakwazi ezininzi.
ke, nasiphi na isizathu yakho ukuhamba, nokuba wena uhamba wedwa okanye nabanye, uthathe imizuzu embalwa ukufuna amatikiti etreyini kwi Gcina i Train, esinikeza i amaxabiso asezantsi, aqinisekisiwe.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho? Cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flondon-paris-train%2F%0A%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml kwaye bangatshintsha / pl ukuba / nl okanye / ngayo kwiilwimi ezininzi.